Hlala uhonjiswe kakuhle xa ubona iintaba - I-Airbnb
Hlala uhonjiswe kakuhle xa ubona iintaba
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguKallaya
Eli gumbi livulekileyo, litofotofo kwaye lihonjiswe kakuhle, lelinye lamatye ayi-2 kwisakhiwo sale mihla esisecaleni kwendlu yethu enendawo yokuphola enechibi elide eliyi-15. Unokonwabela neendawo zethu ezinkulu ezigqunywe ziintaba, ii-sunsets ezimangalisayo zemihla ngemihla kunye negadi yethu entle ecaleni komkhenkce omncinci.
Kwindawo esezantsi egadini yethu uza kufumana izindlu zethu eziyi-2 zamaplanga zaseThailand kwizitrato.
Ngaba uneehotele okanye izindlu ezingasemva ezaneleyo? Ngaba ufuna ukuziva usekhaya ngoxa usendleleni?
Hlala kwindawo yethu yokuhlala ye-boutique uze wonwabele elinye lamagumbi ethu ayi-6 kanokutsho. Hlala kwindawo epholileyo yasemaphandleni ngaphandle kwedolophu enegadi enkulu yetropiki neentaba.
Sinamagumbi ayi-6 xa ewonke ngoko ukuba unomdla kolunye uhlobo lwegumbi, khetha imeko eyahlukileyo (amagumbi ethu akwindlu yamaplanga eqhelekileyo), indawo nje engakumbi, ityeya yabucala okanye uhamba neqela, ungasithumelela umyalezo uze ubuze ukuba iyafumaneka na.
4.94 · Izimvo eziyi-138
Kodwa kufutshane nombindi wesixeko, indawo esihlala kuyo kunye nendawo ezisingqongileyo izolile, ziluhlaza kwaye zizele bubomi beentaka. Sizimitha ezingama-800 kuphela ukusuka kuhola wendlela engaphandle kwelali eqhelekileyo yaseThai. Ngokuthe ngqo kwindawo esikuyo uya kufumana amasimi erayisi, iindlela zasemaphandleni, iindlela zokuhamba intaba kunye neengxangxasi ezi-2 ezibukekayo kumgama webhayisekile kunye neMyuziyam yeNdlu emnyama edumileyo (iimitha ezingama-900). Sikufutshane nendawo edlamkileyo yeyunivesithi enevenkile ezininzi, iivenkile zokutyela kunye neemarike.
Indawo yethu sisiseko esihle kakhulu sokuphonononga amagqabantshintshi ephondo laseChiang Rai njengoko uninzi lweendawo ezinomdla zisemantla nakumazantsi esixeko: iDoi Mae Salong (indawo yokuhlala yokwenyani yamaTshayina kwinduli yentaba), amasimi eti kunye nekofu, iilali zezizwe ezisezintabeni, Umda waseBurma kunye neLaotian (iidolophu), umlambo onomtsalane weMekong kumda weLaos, iigadi zaseDoi Tung Royal kunye nokunye okuninzi ...
Unokuziphonononga ngesithuthuthu okanye sinokukunika ukhenketho lwabucala ongayi kulilibala!
Umbuki zindwendwe ngu- Kallaya
Siyakonwabela ukubukisisa kunye nokukunika indawo yokubalekela kwaye ungakonwabela isixeko esinomtsalane saseChiang Rai kunye nabantu. Yiza uhambe xa uthanda, nxibelelana okanye uhlale uthe cwaka, yitya xa ufuna kwaye ulale xa uziva uthanda.
Siyakonwabela ukubukisisa kunye nokukunika indawo yokubalekela kwaye ungakonwabela isixeko esinomtsalane saseChiang Rai kunye nabantu. Yiza uhambe xa uthanda, nxibelelana okanye uh…
Iilwimi: Nederlands, English, Deutsch, ภาษาไทย
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mueang Chiang Rai